तपाईंको रोगबारे किन झुक्किन्छन् डाक्टर, त्यस्तो बेला के गर्ने? :: PahiloPost
तपाईंको रोगबारे किन झुक्किन्छन् डाक्टर, त्यस्तो बेला के गर्ने?
23rd October 2018, 01:58 pm | ६ कात्तिक २०७५
फोटो : noticierovenevision.net
चार वर्ष पहिले डेबोराह जे कोहन महिनावारी हुँदा उठ्न सक्ने अवस्थामा थिइनन्। खान र शौचालय प्रयोग गर्न गार्हो हुन्थ्यो। उनले आफ्नो पिठिउँमा डल्लो आएकोबारे चिकित्सकलार्इ भनिन्। उनको चिकित्सकले त्यसलार्इ 'ब्याक पेन' भन्दै मांसपेशीहरुलार्इ आराम दिन भने।
'आइस, सिरोप्राटिक केयर वा स्ट्रेचिङ' केहीले पनि काम गरेन। केही दिनपश्चात कोहोनलार्इ अत्याधिक पीडा भयो। उनी फेरि चिकित्सककोमा पुगिन्। तर, सहयोग पाउनुभन्दा पनि धेरै झन्झट बेहोर्नुपर्‍यो।
ड्युटीमा रहेका चिकित्सकले विश्वस्त हुँदै कोहनलार्इ पाठेघरमा ट्युमर भएको घोषणा गरे। तर कोहनको पाठेघरमा ट्युमर थिएन। उनले ट्युमर केही वर्षअघि त्यही अस्पतालमा निकालेको थिइन्। सोही कुरा बताउँदा चिकित्सकले 'आफू झुक्किएको' प्रतिक्रिया दिए।
उनको पाठेघर सामान्य स्थान भन्दा तल झरिसकेको थियो। त्यसलार्इ 'ओभारियन टोर्सियन' भनिन्छ। यो एक मेडिकल 'इमर्जेन्सी केस' हो जसको उपचार गरिएन भने अवस्था नाजुक हुनसक्छ।
पाठेघर निकाल्न एक्कासी अपरेसन गरिएको थियो। तर चिकित्सकहरुले जहिल्यै तपार्इलार्इ सहयोग गर्छ भन्ने छैन। कहिलेकाही चिकित्सकहरुले तपार्इलार्इ भ्रममा पार्न वा दबाब दिन (ग्यासलाइट) गर्न सक्छ।
'ग्यासलाइटिङ' त्यस्तो परिस्थिति हो जहाँ एक व्यक्तिले अरुलार्इ आफूले सोचेको कुरा भन्दा दोस्रो कुरा सोच्न बाध्य पार्छ। 'मेडिकल ग्यासलाइटिङ' भनेको तपार्इलार्इ महसुस भएको लक्षणहरु चिकित्सकहरुले मान्दैनन् र अरु नै रोग लागेको भनेर आश्वस्त गराउँछन्। उनीहरुले तपार्इलार्इ महसुस भएका लक्षणहरु भ्रममात्र भएको भनेर विश्वास गराउन पछि पर्दैनन्।
विश्वमा 'मि टू मूभमेन्ट' का माध्यमबाट यौन शोषण र यौन दुर्व्यवहारका घटनाहरु धेरै बाहिर आउँदै छन्। यसबाट समाजमा विद्यमान लैंगिक असमानता प्रस्ट भएको छ। महिलाको स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयहरुलार्इ चिकित्सकले धेरै पटक ध्यान नदिएको, गलत उपचार गरेको पाइएको छ।
'यो यथार्थ कुरा हो' क्यालिफोर्नियाको स्त्रीरोग विशेषज्ञ जी थोमस रुइज भन्छन् 'लैंगिक विभेद किन हुन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण कुरा हो। यस सम्बन्धमा धेरै अनुसन्धान भएका छन्।' स्त्रीरोग सँग सम्बन्धित केही समस्याहरु जस्तै 'इनडोमेट्रियोसिस'को उपचार गर्न निकै गाह्रो हुन्छ। तर महिलाहरुको स्वास्थ्यलार्इ मात्र चिकित्सकहरुले कम प्राथमिक्ता दिन्छ भन्ने होइन।
'क्रिटिकल केयर'मा प्रकाशित रिपोर्टमा मुटु रोग भएका महिलाहरुलार्इ पुरुषलार्इ भन्दा औषधी र सर्जरी कम मात्रमा दिने गरिन्छ। यस्तै घुँडाको दुखाइदेखि 'स्ट्रोक'का उपचारमासमेत कम ध्यान दिने गरेको पाइएको छ। पेट दुखाइका सम्बन्धमा चिकित्सक कहाँ गए महिलालार्इ ६५ मिनेट लाग्छ भने पुरुषलार्इ ४५ मिनेट लाग्ने गरेको 'एकेडेमिक इमर्जेन्सी' मेडिसिनले जनाएको छ।
'महिलाहरुलार्इ पेटको समस्या धेरै हुने गर्छ। त्यसले गर्दा उनीहरुको रोगबारे चिकित्सकहरुले यकिन रुपमा चाँडै केही भन्न सक्दैनन्।' इन्सपायर सान्तेका संस्थापक इरिन ज्याकसन भन्छन् 'महिलाहरुलार्इ धेरै प्रकारका रोग र लक्षणहरु देखिन्छ। उनीहरु त्यसप्रति चिन्तित हुन्छन्। तर हामी महिलाहरुलार्इ उनीहरुको शरीरका बारेमा सबै थाहा छ भनी विश्वास गर्न सक्दैनौं।'
'म ठिक छु भन्दा निकै त्रासपूर्ण थियो'
ज्याकसनलार्इ १० वर्षसम्म चिकित्सकले उनलार्इ हुने 'पेल्भिक पेन'बारे धेरै चिन्ता लिनु पर्दैन भनेका थिए। ढाडमा धेरै चोट, सुनिने र दुखाइ भएपनि उनलार्इ केही गलत नभएको र बरु मनोचिकित्सकलार्इ देखाउन भनिन्थ्यो' उनले भनिन्, 'म ठिक छु भनेर भनिनु नै निकै त्रासपूर्ण थियो।'
आफ्नो उपचारमा केही प्रगति नभएपछि उनले अरु डाक्टरलार्इ देखाउन सुरु गरिन्। धेरैले उनी ठीक भएको कुरा गरे र उनलार्इ हुने दुखाइ सामान्य रहेको भन्थे। साथै उनलार्इ तनाव नलिन भनिन्थ्यो।
'मैले भनेको विषय नसुनेकाले र मलार्इ सहयोग नगरेकाले चिकित्सककोमा जाँदा मलार्इ निकै डर लाग्थ्यो। तर त्यसबाहेक जाने अरु ठाउँ पनि त छैन।' उनी भन्छिन्।
अन्तत: उनले एक चिकित्सक भेटाइन् जसले उनको दुखाइ सामान्य नभएको भन्दै 'पेलभिक फ्लोर फिजिकल थेरेपिस्ट'कोमा जान सल्लाह दिए। त्यसपश्चात उनको दुखाइ कम भएको छ। उनले आफूलार्इ जस्तै अरु महिलालार्इसमेत त्यस्तो हुने गरेको थाहा पाइन्।
सेन्ट जोन्स हेल्थ सेन्टरका निर्देशक यभोन्नी भोन भन्छन् 'महिलाहरु महिनावारीमा हुँदा हुने दुखाइलार्इ चिकित्सकहरुले सामान्य रहेको बताउने गर्थे। यदि तपार्इ आफ्ना लागि बोल्न सक्नु हुन्न भने वा तपार्इलार्इ भएको दुखाइका बारेमा बोल्न सक्नु भएन भने तपार्इलार्इ उपेक्षा गर्न सकिन्छ।'
एक चिकित्सकले 'तपार्इलार्इ दुखेको छ' भनी महिला बिरामीलार्इ प्रश्न सोधे। महिलाले 'अलि दुखेको छ' भनी उत्तर दिइन्। तर, उनी खुलेर बोल्न सकिनन्। यसबाट महिलालार्इ नै थप समस्या हुने गर्छ।
चिकित्सकले 'ग्यासलाइट' गरे यसो गर्नुस
मिल्ने साथी खोज्नुस: रमाइलो गर्ने बेलाको साथी मात्र होइन आफूलार्इ परेको कुरा साट्ने व्यक्ति खोज्नुस र आफ्नो समस्या बारे भन्नुस्। आफूलार्इ भएको रोग वा कुनै समस्याबारे खुलेर कुरा गर्दा रामो हुन्छ।
आफ्नो समस्यालार्इ प्राथमिकता दिनुस्: डा बोन भन्छन् 'चिकित्सकका नाताले हामी धेरै तनावमा हुन्छौ। हामीकहाँ धेरै बिरामी आउँछन् र समय कम हुन्छ। तपार्इ चिकित्सक कहाँ १५ वटा प्रश्न लिएर जानुहुन्छ भने ति सबै प्रश्नको उत्तर दिन चिकित्सकले नसक्ला। त्यसैले आफूलार्इ भएको वास्तविक समस्याबारे चिकित्सकलार्इ भन्नुस्।'
सचेत हुनुस् : डा रुइज भन्छन् 'एक जना चिकित्सकलार्इ देखाएर आफूलार्इ चित्त नबुझे अरु चिकित्सकलार्इ देखाउनु। मैले धेरै ध्यान नदिने चिकित्सकहरुलार्इ चिनेको छु। यस्तो चिकित्सक कहाँ जानुस जसले तपाइको दुखाइलार्इ संवेदनशील भएर लिन्छ।' पुरुष चिकित्सक मात्र त्यसतो नहुने भन्दै उनले महिला स्त्री रोग विशेषज्ञहरु पनि महिलाका समस्या प्रति असंवेदनशील हुने गरेको बताउँछन्।
-हेल्थ डटकममा प्रकाशित सामाग्रीको भावानुवाद
तपाईंको रोगबारे किन झुक्किन्छन् डाक्टर, त्यस्तो बेला के गर्ने? को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।